Soo saaraha iyo Warshada ugu Wanaagsan Hooyada iyo Ilmaha |Huaruide
Sidee buu u shaqeeyaa hooyada iyo ilmaha?
Shuttle-hooyada iyo ilmaha, oo sidoo kale loo yaqaan nidaamka-shuttle-ku waa xalka ASRS-ta qoto-dheer, guud ahaan waxaa loo shaqeeyaa kaydinta cufnaanta sare.Hooyadu waxay ilmaha ku sidataa dariiqyada si toos ah dariiqyada dabaq kasta.Sida ku cad shuruudaha, ilmuhu wuxuu galaa marinka si uu u soo qaato ama u dhigo suunka.Shuttle-ka Hooyada-Ilmaha ayaa markaa ka dib qaadaa suunka ilaa nidaamka dibadda sida wiish toosan ama gaadiid-qaadayaal.
Sidee Huaruide Hooyada iyo Ilmaha Shuttle u fududeeyaa saadka?
Huaruide hooyada iyo dhallaanka waxaa si gaar ah loogu farsameeyay halbeegga CE, xawaaraha iyo dardargelinta waxaa lagu hagaajiyay cufnaanta sare ee cufnaanta iyadoo loo eegayo shuruudaha wax soo saarka macaamiisha.Isla mar ahaantaana dhawr-hoosaadyada Huaruide hooyada iyo dhallaanka waxay ka shaqayn karaan dabaq isku mid ah si ay u buuxiyaan shuruudaha wax soo saarka sare.Marka shuruudaha soo-saarku yar yahay, hal-abuurka Huaruide hooyada-ilmaha ayaa xamili kara dabaqyo badan, tani waxay siinaysaa dabacsanaan sare ee hawlgallada iyo baaxadda ballaarinta mustaqbalka.
Nidaamka qalabka iswada ee Huaruide hooyada iyo dhallaanka waxaa lagu dhex daray software caqli badan, kaas oo bixiya 100% muuqaal iyo saxsanaan.Software Huaruide ayaa hagta oo kormeera nidaamyada.Waxay la socotaa goobaha alaabada waxayna hagtaa dhaqdhaqaaqa rarka iyadoo si buuxda ula midaysa aaladaha software ee caqliga leh.
• Qarsoon baska bilaa turxaan bixinta sida koronto iyo haga tignoolajiyada rukhsadda tareenka
• Matoorka waxqabadka sare leh ee noocyada caanka ah ee caalamiga ah.
• Waxqabadka dardargelinta heersare ah iyo xasilloonida hawlgalka.
• Tignoolajiyada soo daadinta tooska ah ee bilaa khasaaraha ah ee hormuudka ka ah caalamka.
• Farsamada kontoroolka korantada ee caqliga leh ee aan kala go' lahayn ee wareejinta lakabka.
• Hawlgal toos ah oo toos ah ON-OFF.
• Waxaa ku shaqeeya koronto-dhaliye sare, wareegyada dib-u-celinta aan xaddidnayn.
Lacag ku dallaca khadka tooska ah iyada oo aanay dadku faragelin.
Tignoolajiyada xidhidhiyaha ee bilaa caqabada ah
• Awoodda kaydinta ugu badan ilaa 80-90%.
• Si wax ku ool ah u tirtirto heerka qaladka WMS (Nidaamka Maareynta Warehouse)
• Oggolow balaadhinta sida wax-soo-saarka kor u kaca adoon beddelin qaabka asalka ah
• Xalka ugu habboon ee ganacsiga wax soo saarka, gaar ahaan kuwa ku jira alaabooyinka macaamilka ee dhaqsaha badan, cuntada, cabitaanka, iyo warshadaha silsiladaha qabow.
Xawaaraha ugu sarreeya ee Shuttle Hooyada: 2.5m/s
• Xawaaraha ugu sarreeya ee Shuttle: 1m/s
• Culayska ugu badan: 1.5 tan
• Qalabka Korontada: Basbar/Batari
Heerkulka shaqada ee ugu yar: -30°C
• Qaadashada: 20 - 45 pallet/saacaddii
• Qaabka Xakamaynta: Buugga, Khadka Tooska ah, Online
• Xarumaha qaybinta
• Kaydinta wax soo saarka
• Kaydinta kaydinta
• Kaydinta la qaboojiyey ama barafaysan (-28°C)
• Codsiyada birta-la'aanta ah ee qaybta cuntada iyo cabitaanka (sida warshadaha hilibka)
Hore: Wareejinta lakabka
Xiga: Shuttle Raadiyaha